Uzoshukumisa inkundla 'ewuhlanya' kwiMbewu - Ilanga News
Home Izindaba Uzoshukumisa inkundla ‘ewuhlanya’ kwiMbewu
Uzoshukumisa inkundla ‘ewuhlanya’ kwiMbewu
UXoli uthi uzobanga ukushisa kulo mdlalo
UXOLI Zondi-Zamisa uzobonakala kwiMbewu njengowesifazane ogula ngengoqndo.
UYOBANGA ukushisa kwi-Imbewu: The Seed umlingisi wesifazane owazakhela udumo kwiGenerations endala, uXoli Zondi-Zamisa ozofika kulo mdlalo obalwa nethandwa kakhulu ngababukeli njengoViolet Vilakazi, oyinkosikazi yegeza lensizwa enguMenzi Vilakazi, elingiswa nguMuzi Mthabela.
Njengamanje kulo mdlalo owuchungechunge odlala ku-e.tv ngo-21h30 kusuka ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu, uMenzi usothandweni oluvutha amalangabi noNokubonga Bhengu, uMaZulu (Leleti Khumalo) ongumfelokazi kaZimele Bhengu.
UViolet uzoqala ukubonakala ngoMsombuluko. Uvundululwe yisitha sikaMenzi, uPhakade (Sandile Dlamini), ngesikhathi ematasa epequlula ngemuva lakhe.
Ababukeli balo mdlalo bayazi ukuthi uPhakade ongumfowabo kaZimele, usha amashushu ngokungena uMaZulu kodwa uyachithwa, okuyikhona osekumenza abone uMenzi njengesitha esiyinyoka.
UViolet ugula ngengqondo, uqala ukuvela kulo mdlalo esesikhungweni okwelashwa kusona abanalokhu kugula. Ukugula kwamenza wabekwa icala lokubulala emuva kokuba eshise umuzi wowesifazane ayesola ukuthi uthandana nendoda yakhe.
“Akubanga lula ukudlala le ndawo kwazise uViolet ungumuntu oshintshashintshayo. Phambi kwabantu usuke ebonakala enguyena kepha usuke esezizwa ukuthi kukhona okushintshayo kuyena.
“Nakuba ngike ngayidlala indawo kaZodwa kwiGenerations ecishe iyele kule, kepha le yehlukile kwazise nezigulo zengqondo zihlukene futhi ziphathana ngendlela engafani.
“Kudingeke ukuba ngizenzele ucwaningo lwami eceleni, ngifunde kabanzi ngezigulo zengqondo ukuze ngikwazi ukungena khaxa kule ndawo engiyilingisayo,” kuchaza uXoli.
Yize kunjalo, uthi ukujabulele ukulingisa le ndawo ngoba imphosele inselelo. “Abantu bazoyithokozela indawo engizoyilingisa, ngiletha ukushisa kodwa,” kusho yena ehleka.
Kulo mdlalo uMaZulu ubhekene nenkinga yokuthi umndeni wakhe kawubufuni ubudlelwano bakhe noMenzi, okungenzeka uViolet abe yisixazululo. Ukuvela kwezindaba zokuthi umenzi unenkosikazi, kungaba yinkinga kuyena kwazise usecele umshado kuMaZulu.
UXoli useke walingisa nakweminye imidlalo okubalwa kuyona iFamily Bonds, iGreed and Desire ne-Isipho. Ngaphandle kukaLeleti, uMuzi noThembi Mtshali Jones wodumo lukaThoko kuSgudi Snaysi kwi-Imbewu uXoli uzobe elingisa nabadlali okubalwa kubo uNokubonga Khuzwayo (Zakithi), uNkululeko (Nkanyiso Mchunu), uGugu Mzobe (Nomusa), uRaphael Griffiths (Zithulele) noNonsindiso Gcaba (Zethu).
Lo mdlalo uvame ukwenza okuhlukile ngokumema osaziwayo njengoba kuke kwenzeka kuvela usomahlala waseClermont, uFlymotion, umculi kamaskandi uKhuzani “iNdlamlenze” Mpungose. Ngesikhathi usaqala kwakukhona uKhathide “Tshatha” Ngobe ongumsakazi woKhozi FM.
Previous articleUkhale ngamambawu ‘oklinye wabulala unina’
Next articleUngene ebhokisini exhagiwe osolwa “nomama webhantshi”